साझा बसले भाडामा २० प्रतिशत छुट दिने, अब गोर्खा रुटमा नचल्ने
काठमाडौँ। साझा यातायातले सेवाग्राहीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै लामो दुरीमा चल्ने गाडीमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । साझाले भोलि माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी उपत्यका बाहिरका काठमाडौंबाट– वीरगन्ज, भैरहवा र..
काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सुविधासहितको मेट्रो बस चल्ने
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राजधानीको सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, स्तरीय र व्यवस्थित बनाउन लामा र स्तरीय ठूला बस सञ्चालनका लागि तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाएको छ । स्थानीय..
सवा सात लाख पर्यटक सन् २०१६ मा नेपाल आए, सबैभन्दा बढी भारतीय, चिनियाँ दोस्रो
काठमाडौँ । सन् २०१६ मा सात लाख २९ हजार ५५० जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। सन् २०१५ को तुलनामा सन् २०१६ मा पर्यटक आगमनमा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको..
विद्युत प्राधिकरणमा २७७ जना फ्रेस कर्मचारी माग
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २७७ जना कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आज गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। अघिकृत स्तर तह ९ सम्मदेखि ड्राइभर तह ३ सम्म गरी २७७ कर्मचारी माग गरेको हो। प्राधिकरणले..
सेनाले माग्यो एक सय जना अधिकृत क्याडेट
काठमाडौं। नेपाली सेनाले एक सय जना अधिकृत क्याडेट जुनियर अफिसर पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। सेनाले बिहीबार सूचना प्रकाशन गरी समानुपातिक समावेशी रुपमा एक सय क्याडेटको दरखास्त मागेको हो।..
शाखा अधिकृतमा मागेभन्दा ३० गुणा बढी आवेदन
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको निजामती सेवातर्फको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा अहिलेसम्म मागेको सङ्ख्याभन्दा ३० गुणा बढीले आवेदन फाराम भरेका छन् । आयोगले पाँच सय तीन शाखा अधिकृत पदका..
पोखरामा भूकम्पपछि पहिलोपटक शतप्रतिशत पर्यटक
पोखरा । गत वर्षको भूकम्पपछि भरिन नसकेका पोखराका होटल अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०१७ को अवसरमा यतिखेर शतप्रतिशत भरिभराउ भएका छन् । आन्तरिक पर्यटकले जेनतेन थेग्दै गए पनि शतप्रतिशत पुर्‍याउन नसकिएको अवस्थामा..
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आम्दानी चार अर्बभन्दा बढी
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रू चार अर्ब ५२ करोड १४ लाख आम्दानी गरेको छ । गोरखा भूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण विगतका वर्षहरूमा यात्रुको आवागमनमा..
नेपाली सेनामा २ सयभन्दा बढीलाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं । नेपाली सेनाले विभिन्न रिक्त रहेका पदहरुमा २ सय १६ जना कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ। जनरल स्टोरदेखि ओभरसियरसम्मका विभिन्न ३३ पदका लागि ति कर्मचारी माग गरिएको..
पुनःनिर्माणमा खटिएका ७० प्रतिशत इन्जिनियर र प्राविधिकद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिक तथा इन्जिनियरले राजीनामा दिएका छन् । शतप्रतिशत भत्तालगायत माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका ११ जिल्लाका ७० प्रतिशत इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर र सहायहरुले सरकारलाई आज संयुक्त राजिनामा..
​अब चन्द्रागिरी केबलकार ३५० रुपैयाँमा चढ्न पाइने, खाद्य पदार्थमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । हालैमात्रै उद्घाटन भएको चन्द्रागिरी हिल्स प्राइभेट लिमिटेडले केबलकारको टिकटमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले पुस ४ गतेदेखि १४ गतेसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको..
​पोखराबाट जोमसोमसम्म जिप चल्ने, भाडा १७०० रुपैयाँ
मुस्ताङ। पोखरा–बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा जिप सेवा सुरु भएको छ । साढे नौ करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापित मुक्तिनाथ दर्शन यातायात प्रालिले बुधबारदेखि जोमसोमदेखि पोखरासम्म सिधा जिपसेवा सुरु गरेको हो। जिप सेवाको पूर्वसांसद..
​सरकारी सेवाका लागि लोकसेवा आयोगद्वारा ५०४ अधिकृतको माग (विज्ञापनसहित)
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले ५०४ जना शाखा अधिकृतको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । आयोगले बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापन आह्वान गर्दै व्यवस्थापिका संसद, न्याय, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण र प्रशासन सेवामा दरखास्त..
​लोकसेवामा कुन विकासक्षेत्रबाट कति आवेदन? पुरुषभन्दा महिलाकै बढी
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोग निजामतीतर्फ पुरुषको तुलनामा महिलाको आवेदन बढी पर्ने गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सात प्रतिशत बढी आवेदन पर्ने गरेको आयोगका उपसचिव गीता हुमागाईंले जानकारी दिइन्। गत आव..
​आन्तरिक पर्यटक तान्दै कालीगण्डकीको स्टिमर
पर्वत । कालीगण्डकीमा जल यातायात (स्टिमर) सञ्चालन भएपछि विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला अवलोकन गर्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् परियोजनाको बाँध निर्माणपछि बनेको तालमा कालीगण्डकी जल..
​गाउँ गाउँमा जलविद्युत आयोजना बन्न थालेपछि स्थानीयलाई गाउँ मै जागिर
म्याग्दी। नारच्याङ गाविस– ४ का रेशबहादुर तिलिजा गाउँमै रोजगारी पाएकोमा मख्ख छन् । घरखर्च जुटाउन लामो समय वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडीमुलुक पुगेका तिलिजा अहिले नारच्याङमै निर्माणाधीन पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला..
​तस्वीरमा यस्तो सुन्दर सुदरपश्चिम हेर्नुहोस
कैलालीको चिसापानीमा रहेको कर्णाली पुल । यहाँ अवलोकन गर्ने पर्यटकको भीड लाग्ने गर्दछ । कैलालीको घोडाघोडी ताल संरक्षणको पर्खाइमा । कैलालीको चिसापानीका माछा पर्यटकले खुबै मन पराउँछन् । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा विद्युतीय सवारी साधनबाट..
काठमाडौं – सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सरकारी कामबाहेक अन्य व्यापार–व्यावसाय गर्न पाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय वा अन्य कार्य गर्न पूर्व स्वीकृति दिनेसम्बन्धी..
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा आईकाओको अडिट, नेपाल वायुसेवा निगमका १६ कमजोरी
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सम्बन्धी सेवा दिइरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका एक दर्जनभन्दा बढी कमजोरी सार्वजनिक भएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आईकाओ) अन्तर्गत रहेको आयटा..
साझाले चार रुटमा नयाँ बस गुडाउँदै, कुन कुन रुटमा गुड्दै छन् साझाका बस ?
काठमाडौं । साझा यातायातले उपत्यकाभित्र चार ओटा रुटमा नयाँ बस गुडाउने भएको छ । साझाले भारतबाट खरीद गरेर ल्याएका ३० ओटा नयाँ बस सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाग्मती अञ्चलमा..
​वेरोजगारलाई जागिर दिन के के गर्दैछ सरकार ?
पोखरा । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग धन्दाको विकास गरी युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। पत्रकारसँग आइतबार भएको भेटघाटमा उनले देशमा उद्योग व्यवसायको अभावका कारण रोजगारीको खोजीमा..
​पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको दोस्रो विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा
चितवन । लामो समयदेखि बन्द रहेको चितवनको दोस्रो विमानस्थल मेघौली विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आएको छ । २०६७ सालदेखि बन्द रहेको विमानस्थलमा अहिले पुनः विमान अवतरण हुन थालेपछि स्थानीय खुसी भएका..
विश्व कै विशिष्ट व्यक्तिको मन लोभ्याउँदै पोखरा
पोखरा । अघिल्लो वर्ष सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठक ९मिनी सार्क सम्मेलन० मा सहभागी सार्क राष्ट्रका विशिष्ट पाहुना र त्यसलगत्तै बेलायती राजकुमार ह्यारीलाई आकर्षित गरेको पोखराको सुन्दरताले पछिल्लो पटक भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको..
‘याक अट्याक’ साइकलिङ रेस सुरु
काठमाडौं । विश्वकै उच्च हिमाली भेगमा आयोजना हुने साइकलिङ प्रतियोगितामध्येको एक ‘याक अट्याक’ साइकलिङ रेस सुरु भएको छ । याक अट्याक्क इन्टरनेसनल बाइकिङ सिरिजको दशौं संस्करण लमजुङबाट सुरु भएको हो..
अबदेखी ‘नो वर्क नो पे’ को व्यवस्था
काठमाडौं । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरले अब हड्ताल गरी काममा अनुपस्थित भएको दिनको पारिश्रमिक नपाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको बिहीबारको बैठकले पारित गरेको ‘औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७३’ अनुसार अब..
​नेपाल बैंकमा प्लस टु पास गरेकालाई जागिरको अवसर
काठमाडौं । नेपाल बैंकमा ४७ जना कनिष्ठ सहायक पदका लागि जागिर खुलेको छ । उक्त जागिरका लागि प्लस टु पास गरेका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । जागिर खान इच्छुकले १५ दिन..
सशस्त्र प्रहरीमा ९० जना निरीक्षक र सहायक निरीक्षकको माग
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न पदका लागि जागिर खुलाएको छ। बलको प्रधान कार्यालयले आज सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित गरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (साधारण) र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (साधारण) का..
५ हजार पदका लागि ४ लाखको आवेदन
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको भन्दा कैयौँ गुणा दरखास्त लोकसेवा आयोगमा सरकारी सेवातर्फको आवेदन दिनेको सङ्ख्या माग गरेको भन्दा कैयौँ गुणा दरखास्त दिनेको सङ्ख्या बढ्ने गरेको पाइएको छ । आयोगले..
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २४९ जनालाई जागिर खुल्यो +२ पासले आवेदन गर्न सक्ने (विज्ञापनसहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मानव संशाधन विभागले रिक्त रहेको विभिन्न पदमा नयाँ दरखास्त आह्वान गरेको छ । बैंकले प्रकाशन गरेको सुचना अनुसार सहायक प्रबन्धक पदको लागि ६९, वरिष्ठ सहायक पदमा..
कर्मचारीकोभन्दा मजदुरको ज्याला वृद्धिदर बढी
काठमाडौं । निर्माण औधोगिक र कृषि मजदुरको ज्यालादर वृद्धि अन्य क्षेत्रका मजदुर तथा कर्मचारीभन्दा उच्च रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारी तहमा तलब वृद्धि नभए पनि निर्माण, औधोगिक र..
Results 840: You are at page 18 of 28
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १९ प्रतिशत लाभांश घोषणा
नायिका शिल्पाले सर्वोच्चमा हालेको रिट खारेज, पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो
साइबर अपराधको नयाँ तरिका ‘इमेल फिसिङ’, कसरी हुन्छ इमेल फिसिङ ?
नेपाल क्लियरिङ हाउसको आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न